Shiinaha silikoon carbide tube dhalaalaya iyo exahangers kuleyliyaha Soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Anteli
Tubooyinka shucaaca ee 'Rbsic' (sisic) shucaaca waxay leeyihiin astaamo ka sareysa sida iska caabida daxalka, dulqaadka heerkulka sare, iska caabinta qiiqa, habdhiska kuleylka ee sareeya, foorarsiga xoogga, waqtiga adeegga waqtiga dheer, iwm. ee wax soo saarka warshadaha.
Taxanaha tubooyinka shucaaca ayaa si balaaran loogu adeegsadaa khadadka wax soo saarka ee lifaaqa warshadaha birta iyo biraha. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa nidaamka kuleylka kuleylka iyo nidaamka shucaaca hoosta xaaladaha heerkulka sare, daxalka sare iyo iska caabbinta sare.
a. Dulqaad heerkulka sare
b. Caabbinta daxalka sare
c. U adkaysiga abrasion aad u fiican
d. Qabsashada kuleylka ku habboon.
Waxyaabaha kale ee RBSiC / SiSiC waxay kuxiran yihiin alaabada silikoon ee carbide:
RBSiC (SiSiC) silikoon carbide sic cyclone qaybo ka mid ah / dahaarka duufaanka oo leh adkaansho sare ayaa leh adkaansho sare, heerkul sarre, iska caabin abrasion, caabbinta qiiqa, acide iyo astaamaha iska caabinta alkali, kaas oo si ballaaran loogu isticmaalo dahaarka-iska caabinta ee duufaannada hawo-qaadashada, dhuumaha qiiqa gaaska iyo dhuumaha qaada dhuxusha.
Dhumucdiisuna waa la heli karaa: 4mm - 25mm
Qaab diyaar ah: Tubooyinka, Tuubooyinka Tee, Suxullada, Kondhika, Xalqadaha iwm.
Wax soo saarka ugu muhiimsan ee dhagxaanta silsiladaha silsiladaha silsiladaha leh ayaa kala ah: alwaaxyada iskutallaabta, rollers, tuubbada hawada qabowda, qalabka wax lagu gubo, qalabka tuubbada ilaaliya heerkulka, qaybaha cabbiraadda heerkulka, tuubooyinka shucaaca leh, qulqulatooyinka nafaqeynta, xirmooyinka, fiidmeerrada, xirtaan qalabka dahaarka u adkaysta, taarikada, shaabadaha, siddooyin iyo qaybo qaabdhismeed qaas ah.
1.Can ma siin kartaa muunad?
Haa Waxaan isku dayeynaa sida ugu fiican inaan ku siino tijaabada bilaashka ah.
2.How ku saabsan adeegga iibka kadib?
Waxaan ballanqaadeynaa inaan baddali karno badeecadaha ama soo celin karno haddii ay leeyihiin wax dhibaato ah oo xagga tayada ah.
3.Marka aan kula soo xiriiri karno?
Waxaad nala soo xiriiri kartaa 24 saac maalin kasta.Waan ku faraxsanahay inaan kuu adeegno waqti kasta.
4.Ma i siin kartaa qiimo dhimis?
Haa, waan awoodnaa, Haddii aad wax su'aalo ah qabtid, fadlan nagala soo xiriir emayl ama qaab kale oo lagula xiriiro. 5.Waa maxay ku saabsan MOQ?
6.Ma tahay shirkad ganacsi ama soo saare?
Waxaan nahay warshad iyo soo saare
7. Muddo intee le'eg ayaa dhalmadaadu tahay?
Guud ahaan waa 5-10 maalmood haddii alaabtu taallay. ama waa 15-30 maalmood haddii alaabtu aysan oollin, waa hadba tirada.
8.Dobaro ma bixisaa? ma lacag la’aanbaa mise waa siyaado?
Haa, waxaan ku bixin karnaa muunadda lacag la’aan.
Hore: Silicon Carbide Cantilevers Paddle
Xiga: Xaashida caddaynta rasaasta